LEGO Collectible Minifigures စီးရီး 21 vignettes ပြခန်း
12 / 02 / 2021 12 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 928 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, တည်ဆောက်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, စုဆောင်းထားသောအသေးစားစီးရီး 21, စုဆောင်းထားသော Minifigures စီးရီး 21 vignette, သီးသန့်တည်ဆောက်ခြင်း, Lego, Lego တည်ဆောက်, စီးရီး 21
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်အသုတ်အဘို့ငါတို့သီးသန့်တည်ဆောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရီးထုပ်ပါတယ် စုဆောင်းထားသောအသေးစားဒီတော့ဒီမှာငါတို့ရဲ့ vignette တွေအကုန်လုံးကြည့်ကြည့်ပါ အသက် 71029 စီးရီး 21.
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်အတွင်း၊ Brick Fanatics Justin Winn မှအသစ်စက်စက်တီထွင်မှု ၁၂ ခုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးစုံသောနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည့်မျက်မမြင်အိတ်ထဲရှိဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝါရင့်စုဆောင်းသူများသည်သိသိသာသာလျော့နည်းသောအရေအတွက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုသိရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ယခင်စီးရီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသေးအဖွဲ ၁၆ ခုပါဝင်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသင်ပိုမိုရှာနိုင်သည် Lego Group မှဖြင့်ပြောင်းလဲမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ ဒီမှာ ဦး တည် (အဲဒါအရောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး) သို့မဟုတ်ပါက vignette တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အောက်ဖော်ပြပါ link များမှတဆင့် နှိပ်၍ သို့မဟုတ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်ပြခန်းတစ်ခုတွင်ကြည့်ရှုရန် scrolling ကိုဆက်လုပ်ပါ။
Pug ဝတ်စုံ Guy
Space Police Guy သည်အပြုအမူဖြင့် Alien သူခိုးကိုဖမ်းရန်ကြိုးပမ်းစဉ်နောက်ဆုံး vignette နှစ်ခုသည် display တစ်ခုတည်းအတွက်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဒီတည်ဆောက်မှုစီးရီးသည်သင့်အားကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်များအတွက်ဤဇာတ်ကောင်များအတွက်အတူတကွထားရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့လျှင်သင်မှာယူနိုင်သည် အသက် 71029 စီးရီး 21 မှ LEGO.com အခုပဲ။ Justin ရဲ့နောက်ထပ်ကြည့်ဖို့ Lego တည်ဆောက်ပြီးသူ၏ Flickr စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ၊ သူ့လက်ကိုင်သည်ဘယ်မှာလဲ မင်္ဂလာပါ.
← ဒီထုံးစံ LEGO Super Mario Bowser's Fury ပုံစံကိုကြည့်ပါ
LEGO နွေ ဦး ရာသီ 2021 ခုနှစ်အစုံကျွန်တော်တို့လက်ကိုရဖို့စောင့်ဆိုင်းလို့မရပါဘူး →